402 Spun Polyester Thread Manufacturer
zvinhu: 100% yakakosa polyester
Count: 20S/2, 40S/2, 40S/3, 50S/2, 60S/2, 60S/3, kusvika 80S/2.
Iwe unofanirwa kusarudza iyo chaiyo kuverenga tambo zvinoenderana neshinda zvinhu, ukobvu, uye wekusonesa muchina.
ruvara: Ne 800 mavara, iyo polyester yakaruka Kusona tsvimbo inogona kuenderana zvakakwana kune chero jira mumarudzi akasiyana-siyana.
chiputiriso: Shinda dzekusonesa dzepolyester dzakarukwa dzakaiswa 10yds~10000yds mukoni hombe kana chubhu diki.
High Chemical kugadzikana
Oeko Tex Standard 100 KirasiⅠAnnext 6.
Mahofisi emunharaunda anopa mushure mekutengesa-basa
Kubudirira kwepamusoro: 3000tons / mwedzi (150 * 40'HQ)
Chii chinonzi polyester spun thread?
Spin Polyester Threads, dzimwe nguva inonzi PP kana PP Spun, inogadzirwa nekuruka 100% polyester staple fibers kuita shinda uyezve kupuruzira idzi shinda kuita shinda yekusonesa. Shinda dzeSpun Polyester dzinowanzo gadzirwa mune maviri kana matatu ply.
Ndeupi musiyano uripo pakati pespun polyester nepolyester shinda?
Spun polyester is filament fiber iyo inopfaviswa kuburikidza nekushushikana uye chemistry. Iyo yakanyanya kupfava uye inonwisa (ad-sorbs) kupfuura filament. Nepo spun polyester inogara kwenguva refu mukupfeka-hupenyu, ine ruoko rwakapfava, uye inogona kunyatsoita sedonje (isina lint).
Shinda yepolyester yakarukwa yakasimba here?
Shinda dzepolyester dzakarukwa dzinopa kutaridzika kweshinda yedonje, asi iine elasticity yakawanda. Spin polyester inodhura kugadzira uye kazhinji ishinda inodhura. Isu hatikurudzire spun polyester ye quilting, sezvo isina kusimba se corespun, filament, kana trilobal polyester shinda.
Sewing Thread Technical Data
Tex Mathikiti Kukura Cotton Count Majeji simba Elongation Min-Max Yakakurudzirwa Needle Size
(T) (TKT) (S) (cN) (G) (%) muimbi Metric
Kutyora Simba rondedzero
Ne Tex Kuputsa simba
(cN) Kuputsa simba
CV （%） Elongation panguva yekuzorora
(%) Twist renji
kumonyoroka / 10cm Kumonyorora CV
20S / 2, 30S / 3 Nguo dzakakora sejini, jekete rezasi, jira redenim
20S / 3 Car pamutsago, dehwe bhachi
30S/2, 40S/2, 50S/3, 60S/3 Hanzu uye machira epamba, sehembe, bhurauzi, mbatya dzemitambo, machira emubhedha, chifukidziro chemubhedha.
40S / 3 Cape magurovhosi, macomforter, matoyi, nezvimwe.
50S / 2, 60S / 2 Chiedza chakarukwa jira, senge T-shati, nguo yesilika, hengechepfu, nezvimwe.
Izvi zvinogadzirwa nemasampuli chaiwo eshinda kuitira kuti uve neruvara rwakakwana kuti usarudze shinda yaunoda.
MH sewing thread factory ine work shop 200,000m2, 600 vane hunyanzvi vashandi, inotanga kugadzirwa kubva kune yakasvibirira shinda kuruka, kudhaya, kumonera, kurongedza uye kuyedza, iine michina yemhando yepamusoro uye yakasimba yemhando manejimendi manejimendi system.
Munguva yekugadzira, isu tinotarisira kunaka, uye zvakare kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kugadzirwa kwegirinhi uye mutoro wemagariro ndizvo zvatiri kunetseka nazvo.
MH yekusona tambo inobuda inosvika 3000tons / mwedzi (150 * 40'HQ), uye embroidery thread kubuda kunosvika 500tons / mwedzi (25 * 40'HQ). Zvaunogona kuwana kubva kuMH kukurumidza kutumirwa uye unhu hwakavimbika!
Ratidza Sample Centre
MH inoziva kuti kupa mavara akajeka nekukurumidza kwakakosha pakubudirira kwevatengi vedu uye nekudaro vakagadzira nzira inoshanda uye inoshanda yekuunza nekukurumidza. Maitiro acho anotanga nenyanzvi dzemavara zvikwata uye yepamberi yekuyeresa ruvara michina.
MH test Center ine seti yakakwana yemidziyo yekuyedza, mbishi yaizoyedzwa isati yashandiswa pakugadzira mutsara, uye yakapedza kusona shinda yaizoedzwa kuenzana kwayo, vhudzi, simba, kukurumidza kwemavara uye kuita kwekusona, chete shinda yakakodzera yaigona kutumirwa kunze. kuvatengi.
Munguva yekugadzira dhayi, MH haina hanya chete nezve kuenderana kweruvara uye kukurumidza kweruvara, zvakare ine hanya nezve yakadhayiwa yeshinda spindle chimiro icho chinozoita tambo kudzoreredza kunaka. Seyakakodzera shinda yekuruka chimiro inoderedza iyo yekuputsika mwero panguva yekudzoreredza.
MH ine yakafambira mberi yekurapwa kwegomba uye mvura yekudzokorodza hurongwa hwakazvipira kuita mukuchengetedza simba, kuchengetedza zvakatipoteredza uye girini yekugadzira.
Iyo SSM TK2-20CT yakakwira-yakananga kumhanya yakamhanya michina, haina kungo chengetedza cheni yacho mune chimiro chakanaka neakakodzera tension, uye haina deformation panguva yekufambisa, asiwo ine yakanakira basa pakureba uye mafuta kufanana.
Otomatiki ekufuridzira muchina
Nemuchina uyu wekurongedza wekutakura, unochengeta tambo yekusonera mune yakanaka uye yakaumbika chimiro, uye iyo tsvimbo ichave iri munzvimbo imwechete isina kutsvedza.
Nezve Ningbo MH
Ningbo MH yakagadzwa mu1999, yakasarudzika mune zvipfeko zvekushongedza uye zvekugadzira zvinhu. Mushure memakore ekuvandudza, MH yakagadzira hukama hwebhizinesi nenyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu, nemari yekutengesa $ 150 mamirioni. Iwo makuru zvigadzirwa ndeyokusona tambo, shinda yekushongedza, ribhoni tepi, embroidery lace, bhatani, zipi, kupindirana, uye mamwe machira machira.
Parizvino, MH ine mafekitori mapfumbamwe ari munzvimbo dze3 indasitiri, ine 382,000㎡ nzvimbo yekudyara uye 1900 vashandi.
kutaura kuti ichokwadi:
ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, Oeko Tex Standard 100 class 1